Nkọwapụta nke Realme 5 Pro apụtawo | Gam akporosis
N’oge na-adịghị anya, anyị ga - enweta ama dị ọhụrụ ga - esi na Realme nweta., ụlọ ọrụ ahụ bụbu Oppo ogwe aka maka ahịa India, nke ọ na-adịghị arụ ọrụ na ya naanị. Anyị na-ekwu nke ikpeazụ n'ihi ụlọ ọrụ ahụ agbasawo mba ụwa n'ọtụtụ mba, gụnyere China, ọ bụghị n’oge gara aga.
Ma nke ọma, na-elekwasị anya na ngwaọrụ anyị bịara ikwu maka oge a, nke bụ Ezigbo 5 ProAnyị nwere ụfọdụ data agwakọtara ọnụ, ma ha metụtara ihe ekwentị a na-echere anyị, nke na-ekwe nkwa inye asọmpi siri ike n'akụkụ nke ebumnuche ya.
User Sudhanshu Ambhore (@ Sudhanshu1414) has been the Source ọnụ mmiri nke ahụ enyela anyị Realme 5 Pro leaked ụdịdị site na ederede biputere na Twitter. Nke a na-agwa na ọnụ ga-eji chipset Snapdragon 712, otu n'ime Qualcomm ọhụrụ mobile nyiwe na-egosi onwe ya dị ka nta njikarịcha nke Snapdragon 710.
48MP Sony IMX586 isi ihe mmetụta?
AMOLED gosipụtara Waterdrop Notch
Nyochaa akara mkpịsị aka mkpị#nke # realme5Pro #mezie # Quad5quad
- Sudhanshu Onyema (@ Sudhanshu1414) August 12, 2019
Ọzọkwa, ihuenyo mkpanaka ahụ ga-abụ teknụzụ AMOLED ma nwee ọkwa n'ọdịdị mmiri mmiri. Nke a ga - enwe onye na - agụ akwụkwọ mkpịsị aka agbakwunyere n'okpuru ya, yabụ ọ na - ekwu n'echeghị na n'azụ anyị ga - achọta sistemụ foto quadruple anọ, nke a ga - eji 586 MP Sony IMX48 isi ihe ngosi XNUMX, oghere dị nwayọ nwayọ, oghere igwe na ihe nke anọ nke amaghị ihe ọ bụla.
Realme smartphone nwere igwefoto 64 MP nwere ụbọchị ọhụụ nke ọhụụ
Ekwughị ihe ndị ọzọ dị na ekwentị ahụ, dị ka ike batrị ya na nha ihu ya, mana mpempe akwụkwọ zuru ezu kwesịrị ịpụta na izu ole na ole sochirinụ. A ga-ekpughekwa nkọwa nke ọnụahịa ya na nnweta ya n'ahịa n'oge na-adịghị anya., na anyị ga-ege ntị ijide ha ozugbo ha bilitere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nkọwapụta nke Realme 5 Pro apụtawo ma gwa anyị banyere etiti dị ike
Meitu rụkọtara ọrụ na Huawei iji melite algorithm nke igwe foto ya